Puntland oo Xarunta Xisbiga Wadajir ee Garowe Al-baabada isugu dhufatay. – Kalfadhi
Puntland oo Xarunta Xisbiga Wadajir ee Garowe Al-baabada isugu dhufatay.
Wararka ka imaanayo magaalada Garowe ee Xarunta Maamulka Puntland ayaa sheegaya in Xalay Al-baabada la isugu dhuftay Xarunta Xisbiga Wadajir oo muddo ka yar bil ka furan Xarunta Puntland ee Garowe.
Xisbigaan waxaa hogaamiye ka ah Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waxaana markii uu furay laga shaqaaleysiiyay dhowr qof oo katirsan dhalinyarada aqoon-yahaanada Puntland ah lamana oga sababta rasmiga ah oo loo xiray Xarunta Xisbiga ee Puntalnd.
C/salaan Xassan Xirsi oo ah Guddoomiyaha gobolka Nugaal ee Puntland ayaa la sheegay in uu bixiyay ammarka lagu xiray xarunta Xisbiga kadib markii uu sheegay in Puntland aysan dooneyn, in uu saameeyo loolanka u dhaxeeya Dowladda Dhexe iyo Xisbiyada Mucaaradka ah ee ka jira Soomaaliya.
“Puntland ma dooneyso in uu saameeyo loollanka u dhaxeeya Madaxtooyada Soomaaliya iyo Xisbiyada Mucaaradka ah, sidaas darteed waxaan amar ku bixinay in guud ahaan xisbiyada ka dhisan Soomaaliya, aysan wax xarumo ah ka furan karin deegaannada Puntland” ayuu yiri mid kamid ah mas’uuliyiinta la shaqeysa Guddoomiyaha Gobolka oo la hadlay Warbaahinta Gudaha ee Puntland.
Ma jirto wax war ah oo ka soo baxay Madaxda Xisbiga Wadajir oo ku aadan go’aanka lagu xiray Xaruntii ay ku lahaayeen Magaalada Garowe ee Xarunta Maamulka Puntland. Xiriiro aan la sameynay Mas’uuliyiin katirsan Xisbiga Wadajir wali nooma suurta gelin in aan helno.
Hoggaaminaya Xisbiga Wadajir C/raxmaan C/Shakuur Warsame ayaa xariga ka jiray Xafiiska cusub ee Garowe, taasoo aheyd markii u horeysay oo Xisbiga meel ka baxsan Muqdisho xafiis ka furto
Guddiga Madax-banaan ee Dastuurka Soomaaliya oo helay xarun uu ku shaqeeyo
Baarlamaanka Kenya oo Khilaafka Soomaaliya iyo kenya Su’aalo ka weydiinaya Wasiirkooda Arimaha Dibadda
Baarlamaanka Kenya oo Khilaafka Soomaaliya iyo kenya Su'aalo ka weydiinaya Wasiirkooda Arimaha Dibadda